OTU ESI ACHỌPỤTA ID GỊ NA ỤMỤ KLAS GỊ NA IHE KPATARA YA - NETWORK NA INTANETI - 2019
Akwụkwọ gị na weebụsaịtị Odnoklassniki nwere oke dị ka ID nke gụnyere nọmba. Ntak emi enye ekeyomde? - Nke mbụ, iji weghachite akwụkwọ gị site na ID, ma ọ bụrụ na ejiri ya ma ọ bụ na ị chefuru paswọọdụ gị.
Otú ọ dị, otu esi achọpụta ID gị, ma ọ bụrụ na ị gaghị aga ụmụ klas gị? Anyị ga-ekwu banyere nke a, n'eziokwu, ọ dịghị ihe dị mgbagwoju anya ebe a. Mbụ banyere ebe ID ID dị na profaịlụ gị, ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta ya, mgbe ahụ ọ bụrụ na-egbochi ohere. Hụkwa: Enweghị m ike ịbanye Odnoklassniki.
Lelee ID profaịlụ gị na Odnoklassniki, ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta ya
Iji hụ ID ahụ, ọ bụrụ na ịnwere ike ịbanye na ibe gị, pịa njikọ "More" n'okpuru foto profaịlụ wee họrọ "Gbanwee ntọala".
View ID na ụmụ klas gị na profaịlụ gị
Na peeji nke ntọala nke na-egosi, n'okpuru ebe a ka a ga - enwe ihe "ID profaịlụ gị na ụmụ klas gị", nke a bụ ihe ịchọrọ.
Esi lelee ID nke amachibidoro ibe
Enwere ụzọ abụọ dị mfe. Nke mbụ kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịkpọ otu n'ime ndị enyi gị ma gwa ha ka ha mepee profaịlụ gị na Odnoklassniki. Mgbe ọ mepee peeji nke gị site na akaụntụ ya, ebe nkesa ahụ ga-adị n'adres okwu odnoklassniki.ru /profaịlụ / nọmba - nọmba ndị a bụ ID gị ị nwere ike iji.
Ụzọ nke abụọ bụ ịpịnye na Google ma ọ bụ Yandex ịchọ aha mbụ, aha ikpeazụ, obodo, na okwu Odnoklassniki. Na nsonaazụ ọchụchọ ị ga-ahụ ọtụtụ profaịlụ (dabere n'otú aha gị si adịkarị), njikọ nke bụ otu ihe ahụ: odnoklassniki.ru /profaịlụ / nọmba - ọzọ, dị ka ọnụ ọgụgụ kachasị ọhụrụ ị nwere ike ịchọpụta ID gị na netwọk mmekọrịta gị.
Lelee ID site n'ịchọ Intanet
N'ọdịnihu, ị nwere ike iji ID gị kpọtụrụ ọrụ Odnoklassniki nkwado na iji weghachite ma ọ bụ gbaghaa ibe.